प्रतिपक्षीले कमजाेर त्यान्द्राे समाएर अान्दाेलन गर्न खाेजेकाे प्रम अाेलीकाे अाराेप
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिपक्षी दलले कमजोर त्यान्द्रो समाएर आन्दोलन गर्न खोजेको बताएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले जनताको पक्षमा गरिरहेको कामलाई ओझेलमा पार्न अनेकन प्रयास भएको बताए ।
अाेली सरकारकाे शासन पञ्चायतीजस्ताे, शासकहरू राजा-महाराजाजस्ताे : रमेश लेखक
कामाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वमन्त्री रमेश लेखकले सरकारको गतिविधि हेर्दा शासन पञ्चायतीजस्तो र शासकहरू राजा–महाराजाजस्तो देखिएको बताएका छन् ।
अाेलीलार्इ बाबुरामकाे व्यङ्ग्य : पहिले नाैबिसे पुग्ने व्यवस्था गरिदिनुस्
काठमाण्डौ । पानीजहाज चढेर कलकत्ता जाने निमन्त्रणा गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई पहिले गाडीमा नौबिसे पुग्ने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाकाे बैठक शुरू, सार्वजनिक महत्वकाे विषयमा बाेल्दै प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल शुरु भएको छ । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक महत्वका विषयमा आफ्ना धारणा राखिरहेका छन् । नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपति कार्यालय एवं उपराष्ट्रपति कार्यालयको विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री अाेलीले भाेली संसदलार्इ चीन भ्रमणबारे जानकारी गराउने
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो चीन भ्रमणबारे प्रतिनिधिसभाको भोलिको बैठकमा जानकारी गराउने भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली चीनको ६ दिने राजकीय भ्रमण पूरा गरी यही असार १० गते स्वदेश फर्किएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो चीन भ्रमणबारे प्रतिनिधिसभाको भोलिको बैठकमा जानकारी गराउने उनका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री अाेलीकाे चीन भ्रमणमा 'ब्रेकथ्रु' हुन सकेन : डा. रामशरण महत
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा कुनै ब्रेकथ्रु हुन नसकेको बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लबमा आइतबार भएको साक्षातकार कार्यक्रममा डा. महतले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण सकारात्मक भए पनि बाहिर प्रचार गरिएकोजस्तो कुनै उलटपुलट नभएको बताएका हुन् ।
केही वर्षमा रेल अाउँछ, हतार गरेर हुँदैन : प्रधानमन्त्री अाेली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ रेल हतारोमा ल्याउन नहुने बताएका छन् । ६ दिने चीन भ्रमण सकेर आइतबार स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘धेरै हतारो भन्दा परिपक्व ढंगले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। परिपक्व ढंगले डिटेल सर्भे गरेपछि केही वर्षमा रेल आउँछ ।’